China Aluminium-ruoko rwakarukwa Bistro Set (AV-T103) vagadziri uye vanotengesa | Aviva
Kandira NDIMA TABLE BASE
Kandira ALUMINUM TABLE BASE
Block B, Yakazara Flat, 22 Haikou Road, Zhangcha Town, Chancheng Zone, Foshan, Guangdong, China
Mon - Zuva: 9: 00–18: 00
Aluminium-ruoko rakarukwa Bistro Set (AV-T103)
1.Hand kuruka tambo dhizaini
2.Lightweight uye yakasimba solid aluminium alloy furemu
Muitiro wekushandisa tambo yakarukwa kugadzira fenicha itsika inodzokera kunguva dzekare muEjipitori. Mumazuva iwayo ekutanga, maIjipita echinyakare vaishandisa tambo dzakarukwa kugadzira zvigaro-tambo zvigaro zvigaro. Izvo zvinhu zvakadonha kubva mukufarira kwezviuru zvemakore kudzamara yazvino yamukazve sechinhu chekutanga mumhando dzakasiyana dzemidziyo. Vanhu vanokoshesa yakarukwa tambo fenicha yesimba rayo pamwe nekusiyana-siyana kunobvumira kwakasiyana siyana fenicha zvitaera uye mashandiro.
Fenicha vagadziri vanofarira tambo nekuti inovabvumidza iwo mukana wehuwandu hwekugadzira nekushandisa chete imwechete mhando yezvinhu. Kunze kwekushongedza, vagadziri vanogona kusarudza imwe yenzira dzakati wandei yekusunga tambo pamwechete senge kuruka, kuruka, kuruka, kana kuruka. Zvakare zvakareruka kuruka tambo mukati nezvimwe zvinhu zvekutarisika zvakanyanya.
Iyi yega yekutandarira uye bistro macheya akagadzirwa kubva patambo yakarukwa, iine aruminiyamu alloy furemu yakasanganiswa neese-yemamiriro ekunze tambo kugadzira yakasarudzika yakasarudzika yekuunganidza iyo inogona nyore kugadzirisa mabharconi uye madiki nzvimbo, kunyanya akakwana mabistros, ekunze mabara, dhiza, poolside nekuseri.
Iyo tafura yekofi inogadzirwa neupfu hwakafukidzwa nealuminium alloy iyo isingaremi uye yakasimba yakasimba, iri nyore kuchenesa nekufamba, inokodzera chero hurukuro. Yakanaka pakushongedza kwemba, kofi shopu, bistro, gadheni, kumashure, balcony uye cafe.
1 x Tafura (Cast Iron Tafura Base uye HPL Tafura yepamusoro)
2 x Ruoko-rwakarukwa Tambo Chigaro chevanhu (Olefin NeCore Saizi Dia. 6mm uye Plastic Wood Armrest)
Tafura: Dia.70 * 73CM
Kofi Tafura: DIA.45 * 56CM
Armchair: 53 * 58 * 80CM
Kavha: Yakagadzika uye Carton
Kuwedzera Ruzivo: Ruvara, saizi, zvidimbu zvezvikamu zvinogona kuve zvakagadziriswa, OEM inogara ichigamuchirwa.
Taura nesu kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu.
Pashure: Aluminium-ruoko rwakarukwa (AV-T78)
Zvadaro: Kandira ALUMINUM TABLE BASE ATB-320
Aluminium-ruoko rakarukwa Bistro Set (AV-T18)
Aluminium-ruoko rakarukwa (AV-T16)
Aluminium-ruoko rakarukwa Bistro Set (AV-T16)
Aluminium-ruoko rwakarukwa (AV-T01)
Aluminium-ruoko rakarukwa Tafura Set (AV-T72)
Aluminium-ruoko rakarukwa (AV-T18)